Conjunctivitis - ukuvuvukala conjunctiva esweni ngenxa uxhumane nalo Amagciwane nama-virus. ukwelashwa Conjunctivitis emhlabeni namuhla akuyona omningi inselele. Nokho, amalungiselelo abakhethiwe kahle kungaholela isifo esingelapheki, futhi ayibulale nzima nakakhulu. Wenzeka, lesi sifo kungase kube kokubili oluqinile nobumnene nge izimpawu zokwelashwa conjunctivitis kunikezwa emazingeni ahlukahlukeneko. Kukhona izimiso ezithile ukwenza kube ngempumelelo ngaphezulu.
Izimiso ekulweni nezifo
Into ebaluleke kakhulu ukuthi ukubhekana nale nkinga kumele kube onguchwepheshe. Njengoba kudokotela wamehlo okunethiwethi kuphela kuzosiza ukusungula Ihlahlubo linqume izidakamizwa kunesidingo. Esimweni lapho, ngoba noma ngabe yisiphi isizathu, vakashela udokotela sika akunakwenzeka, kufanele wazi ukuthi ngisho noma izimpawu zenzeka nelihlo elilodwa, kufanele aphathe bobabili. Ngaphezu kwalokho, umuthi wokuqala bangcwabe amehlo enempilo, futhi-ke, futhi owayegula. Pipette kungcono ingamthinti Isivalo kanye eyelashes. Isiguli liyadingeka ukwaba amathawula ahlukene kanye izitsha. Ngesikhathi esifanayo, ukulalela isitho onesifo ngemithi yokwelapha, kufanele neze kusaladi, noma ukudala indawo evumayo amagciwane adala izifo. Kulokhu, ekwelapheni conjunctivitis ngeke ukuqhubekisela phambili ukuvuvukala.
Acute conjunctivitis webhaktheriya
Kuleso simo, uma isifo kuyinto webhaktheriya wolimi, kungaba ukubulala lwegciwane ngezilapha magciwane noma sulfanilamide amalungiselelo. Nokho, ukuphuza umuthi onamandla kangaka azinakugcinwa ngaphandle kadokotela futhi ngaphandle ukuhlaziywa ngaphambi. Ngezinye izikhathi, udokotela, siphendule umbuzo indlela yokuphatha conjunctivitis, kungaba aphoyintimenti ejenti elwa namagciwane, futhi ngemva kokwamukela umphumela ukuhlaziya - lesifanele ukwelashwa lwemithi. Uma umzimba onesifo has a lot of ubomvu, ke hashaza ke isixazululo kuwufanele potassium permanganate noma furatsilina. Ngokuvamile, ngokuvamile kubonakala conjunctivitis webhaktheriya ezinganeni. ukuphathwa encane Kwenziwa besebenzisa izidakamizwa efanayo abadala.
Leli fomu kubhekwa lubucayi kakhudlwana ngenxa yokuthi kaningi esiholela yezinkinga lonke iso. Udokotela wamehlo ngokuvamile zinikezwa ukuthola imithi elwa namagciwane akuyona ngaphandle kuphela kodwa futhi ngaphakathi.
Ukwelashwa nokuvikelwa conjunctivitis iguliswa
Ngokuvamile, kuqala lesisihlabelelo imithi ukunciphisa isimo sengqondo nomzimba. Lezi zihlanganisa, isibonelo, "Suprastin" amaphilisi noma lehla "Zertek". Amehlo wabeka yokugcoba equkethe hormone ngama-corticosteroid. Kodwa ungakhohlwa ukuthi ngesikhathi ukukhuthazwa ithuba conjunctiva eyolanda i inyuka ukutheleleka. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukwazi ukuthi hormone ukwenza kahle ukuvuvukala, ngesikhathi esifanayo ukunciphisa ukumelana isitho lesiguli ezibukwayo izifo kalula. Yingakho ekwelapheni lolu hlobo conjunctivitis akunakwenzeka ukuba afeze ngaphandle kosizo onguchwepheshe, ubani omisa ukusetshenziswa corticosteroids ngokuhlanganyela izidakamizwa elwa namagciwane. Ngenhlanhla, isizukulwane esisha izidakamizwa ukuthi sihlanganise lezi zingxenye ezimbili. Ekuphetheni, Ngithanda wazi ukuthi ukubukeka profilaktirovat yalesi sifo ulula kakhulu ukwedlula iphawundi yayo ikhambi. Kuze kube yimanje, kuyafaneleka ukukhumbula ukuthi ukugujwa imithetho aphansi kwenhlanzeko kuzosiza kokubili ngabantwana nangabantu abadala kungukuthi ebhekene nenkinga efana conjunctivitis webhaktheriya noma ezibangelwa amagciwane.
Amafa Basic ukukhiqizwa
Ubani owaveza i-cartoon "I-Cold Heart" kuma-US nasezinguRussia izinguqulo